अनुदान रकम फिर्ता गर्दै भूकम्पपीडित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
अनुदान रकम फिर्ता गर्दै भूकम्पपीडित
पुस २, २०७५ आश गुरुङ
लमजुङ — भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका राइनास नगरपालिका–८, तार्कुघाटकी सुकमाया आलेले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिइनन् ।
लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका ३, फुलिङगिरीका भूकम्पपीडित घर निर्माण गर्दै । तस्बिर : आश/कान्तिपुर
वर्ष दिनअघि किस्ता रकम लिएकी उनले घर बनाइनन् । उनले केही दिनअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय बेंसीसहरमा आएर त्यो रकम फिर्ता गरिन् ।
‘छोराबुहारीआफ्नो पेसा व्यवसायले घरबाहिर छन् । आफू एक्लै । घर बनाउन सकिँदैन । अनि आएर ५० हजार रुपैयाँ नै फिर्ता गरेँ,’ उनले भनिन् । अनुदान लिएर घर नबनाउँदा उनलाई डर लाग्यो । ‘अरूले दिएको पैसा किन राख्ने म ? भोलि कालोसूचीमा राख्ला । छोरा, नातिनातिनाको नागरिकता बन्न रोकिएला । वृद्धभत्ता रोकिएला । यस्तै सम्झिएँ अनि फिर्ता गरेँ ।’
बेंसीसहर नगरपालिका १०, हिलेटक्सारका लालबहादुर तामाङले पनि पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरे । ‘छोराबुहारी घर बस्दैनन् । बूढी छैन । एक्लो ज्यान । कसरी घर बनाउनु ? भो, घर बनाउँदिनँ भनेर रकम फिर्ता गरेँ,’ उनले भने । अहिले पाएको ५० हजार रुपैयाँले केही नहुने उनको तर्क छ । ‘पहिल्यै घर बनाएकाले त पैसा पाएका छैनन् । छिमेकीले बनाएको घर पनि पास भएनछ,’ उनले भने, ‘मैले बनाएको पास हुन्छ कि हुँदैन । सरकारले दिएको पैसाले मात्रै घर बन्दैन । आफूसँग सुक्को छैन । भैगो भनी फिर्ता गरिदिएँ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला कार्यालयका फोकल पर्सन शिव रेग्मीका अनुसार पुस मसान्तभित्र घर निर्माण सुरु गर्न वा दोस्रो किस्ता लिन समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको समयसीमामा घर निर्माण सुरु गर्न नसक्ने वा नचाहनेले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
विविध कारणले घर बनाउन नचाहने लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम फिर्ता गरेको उनले बताए । ‘घर बनाउन नचाहने वा नसक्नेले प्रथम किस्ताको रकम फिर्ता गर्छु भन्नेहरू आउन थालेका छन्,’ उनले भने । प्राधिकरणले दोहोरो सुविधा लिएका तथा अर्को ठाउँमा सुरक्षित घर भएका लाभग्राहीलाई आफूले लिएको पैसा फिर्ता दिन पुस १५ सम्मको समयावधि तोकेको छ । फिर्ता नगरे सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
राइनास नगरपालिका १, बोराङखोलाकी शान्ता न्यौपानेले भूकम्पले घर भत्किए पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेका कारण अनुदान पाइनन् । उनले गुनासो फारम पनि भरिन् । अहिलेसम्म यसको निर्णय छैन । ‘कोही घर बनाउँछु भन्दा अनुदान नपाउने । कोही फिर्ता गर्ने । कोही अनुदान लिएर चुपचाप बस्ने । कोही अनुदान लिएर घरै नबनाई बस्ने । यस्ता छन् । हामी पीडितले अनुदान नपाउने ?’ उनले भनिन् ।
भूकम्पपीडित भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासा फारम भर्नेहरू ६ हजारभन्दा बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार लमजुङमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि कुल लाभग्राही सूचीमा १३ हजार ९ सय ५९ छन् ।
१३ हजार ४ सयले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लगिसकेका छन् । ५ हजार १ सय ६८ ले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगिसकेका छन् । ९ सय ३० जनाले तेस्रो अर्थात् अन्तिम किस्ता १ लाख रुपैयाँ लगिसकेका छन् । प्रबलीकरण सूचीमा परेका ५ सय ३९ मध्ये २ सय ९८ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लगिसकेको फोकल पर्सन रेग्मीले बताए ।
प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०८:१५
यौन प्रलोभनमा हत्या
महोत्तरी — औरही २, फूलबरियाका ४० वर्षीय किसान बेचु महतोको हत्या यौन प्रलोभन देखाएर भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । गौशाला प्रहरीका अनुसार अर्काको शारीरिक सम्बन्ध लुकाउन महतोको हत्या भएको हो ।
घरदेखि अलि पर करिब २ कठ्ठा खेतमा उनले काउली लगाएका थिए । नीलगाईले काउली खाएर दु:ख दिन थालेपछि उनी केही समयदेखि खेतमै बस्थे ।
‘मलाई उसले (बेचु) हप्कीदप्की गर्‍यो,’ जितनीको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने, ‘मोबाइल पनि खोस्यो र लोग्नेलाई भनिदिने धम्की दियो ।’ ५ वर्षीय छोराकी आमा जितनीका पति विजय केही समयदेखि सिरक बनाउन काठमाडौंमा छन् । प्रहरीलाई जितनीले दिएको बयानमा मंसिर २५ गते बेचुले आफूसँग यौन सम्पर्क नगरे मोबाइल नदिने र घटना भनिदिने धम्की दिए ।
मध्यरातसम्म बेचुको नआएपछि राधादेवीले हल्ला गरिन् । छिमेकी र प्रहरी खोज्दै खेतमा पुग्यो । त्यहाँ नदेखेपछि खोज्ने क्रममै मंसिर २६ गते बुधबार बेचुको शव उखुबारीमा भेटियो ।
प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०८:१४